trains Archives | တစ်ဦးကရထား Save
ဥရောပအလှဆုံးလမ်းများကိုအချို့နှင့်ပြည့်ဝ၏. အများဆုံးကြော့နှင့်ရောင်စုံအနေဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖို့. အလှဆုံးလမ်းများကိုခုနှစ်တွင်ဥရောပအချို့သည်ပြီးသားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းအပေါ်ပေမယ့်အခြားသူများကိုသာအစစ်အမှန်က hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ကြ၏…
သမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာများနှင့်နေရောင်ကနေအထိကြီးအမြင်များရာပေါင်းများစွာလိုဏ်ဂူတောင်ပေါ်ကမ်းရိုးတန်းကိုနမ်းနဲ့အတူ, ဥရောပအမှန်တကယ်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာလမ်းခရီးစဉ်များအတွက်စုံလင်သောဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့သင့်ရဲ့လမ်းကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်…
မကြာခဏသူ့ရဲ့ပိုကြီးတဲ့အိမ်နီးချင်းလန်ဒန်၏ရှည်လျားသောအရိပ်အားဖြင့်ယုတ်လျော့, Bedfordshire အတွက် Luton တစ်ဦးအလည်အပတ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်မယ့်တစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်. ဆဌမရာစုအတွင်း Saxon အားဖြင့်ခရိုင်၏ဖမ်းယူခြင်းတွင်အောက်ပါတည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်တစ်ဦး '' ကိုထွန်း '' အဖြစ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ (စေ့စပ်ခြင်း) which sprang…
ခေတ်သစ်အနုပညာချစ်သူများဥရောပတွင်သွားရောက်နေရာအများအပြားရှိ. ရှေးခယျြမှု၏ထိုကဲ့သို့သောစည်းစိမ်နှင့်, ဖြစ်ကောင်းအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအနုပညာတူးဖော်ရေးများအတွက်ဥရောပရဲ့ချုပ်ဟော့စပေါ့သွားရောက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်, ပတ်လည်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်?…
ပြီးသားသူတွေကိုသတိထားမိမ, Black ကသစ်တောတောင်ဘက်-အနောက်ဂျာမနီမှာနေတဲ့ကျယ်ပြန့်သစ်တောဒေသဖြစ်ပြီး. ပိုများသောအထူး, က Baden-Wurttemberg ပြည်နယ်တည်ရှိသောကြောင့်တစ်သိသာသောအဘို့ကိုယူထားသောရဲ့. ထို့အပြင်, ဒေသတွင်းပြင်သစ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, so it’s accessible…
ခရီးသွားလာအချို့ကုထုံးနိုင်ပါတယ်; while the same could lead toalot of phobias for others. People who like traveling will probably even looking at their train seat booking for the travel and ensure that they travel. ဤဆောင်းပါးသည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…
ပဲရစ်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရထားခရီးသွားအများအပြားအခွင့်အရေးနှင့်တကွကြွလာ. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဒါကြောင့်သွားလာရန်အရှိဆုံးအဆင်ပြေလမ်းဖွင့်. အဆိုပါထိုင်ခုံကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်, သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်တွင်အလိုတခုတည်းထက်သင်ပိုမို legroom ခွင့်ပြု. ရထားဖြင့်သွားခြင်းသည်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်…